Cute Model, Wutt Hmone Shwe Yi in Sexy Evening Dress | Myanmar Model Girl and Supermodel Photos
Cute Model, Wutt Hmone Shwe Yi in Sexy Evening Dress
Myanmar Cute Model, Wutt Hmone Shwe Yin in Sexy Evening Dress
Here are the photos of Wutt Hmone Shwe Yi who showed up at the ceremony of honoring Academy Awardees which is organized by Director Zin Yaw Mg Mg. This ceremony was held5February 2011 at Inya Lake Hotel.
sengFebruary 7, 2011 at 8:21 AMnice dressReplyDeleteMr.fireloveFebruary 7, 2011 at 4:33 PMအူဝဲလေးကသဘော်ပေါက်တော့ ပြုံးစိပြုံးစိနဲ့ ဒီကောင်းမလေးငါ့လိုပဲ နာတော့မယ်.....ဟီးဟီးတဲ့ReplyDeletenora sumFebruary 7, 2011 at 6:01 PMဟီးဟီးဟီး....ပြောကြပစေ..ပြောကြပစေ ဒီနည်းပဲ နာမည်ကြီးစရာရှိဒါကိုး....ReplyDeletethitFebruary 7, 2011 at 7:12 PMကိုယ်တုံးလုံးသာချွတ်ပြလိုက်တော.မျိုးချစ်စိတ်မရှိတဲ.ကောင်မငါသာသူ.နေရာမှာဆိုဖိုးလပြည်.ကိုသေအောင်သတ်ပြီးပြီReplyDeleteAgyikaungFebruary 8, 2011 at 9:06 AMပြတော့လည်း ကြည့်ရတာပေါ့ ။ ပြသာပြ ။အားပေးတယ်။ဂွမ်းတော့ မဂွမ်းနဲ့ ။ အဲ့ဒီ အသိုင်းအ၀ိုင်းက အဲ့လိုပဲ ။စပွန်ဆာ လိုရင်ပြေား..ReplyDeleteadoreFebruary 8, 2011 at 10:47 AMအူဝဲလေး သနားပါတယ်...သူ့ခမျာ ဒီနှစ် မှန်းထားရှာမှာဘဲ...ခုတော့ သူများပွဲဘဲ တက်နွှဲရတယ်...ReplyDeleteaungFebruary 8, 2011 at 6:43 PM၀တ်မှုန်လေးရေ ဇင်ယော်ကြီးကိုသတိထားနော် မဆင့်လိုဖြစ်နေမှာစိုးလိုပါ ဒီကောင်ကြီးကတက်သစ်စနာမည်ကြီးရင် ကောက်စားခံရမှာစိုးတယ် တော်ကြာ စိုင်းစိုင်းနှင့်ကွိုင်တက်နေမှာနော် မပြောချင်ဘဲ့ပြောလိုက်ရလို့ အားတော့နာပါတယ်။ReplyDeletemr.phoneFebruary 8, 2011 at 8:22 PMရုပ်ရှင်ကားကြီး..နှစ်ကားလောက်ရိုက်ပေးမယ်..ပြောရင်.. ၀တ်မှုန်လဲ ...စပွန်ဆာ .ပေးမှာကို ဇင်ယော်ကြီးက သိနေတယ်လေ....စားလာတာများနေတော့...ReplyDeletesaihtetwai19February 12, 2011 at 2:14 PMမ..မ..၀တ်မှုံန်ကအ၇မ်းချောတယ်နော..ReplyDelete265567February 17, 2011 at 1:15 AMwutt hmone bay yort ma inndra doe ka ngote dol del so different.ReplyDeleteအချစ်လေးပါOctober 5, 2011 at 11:58 PMစားတဲ့ အကြောင်းတွေပဲ ပြောနေကြလို့လေ..... ဘာကို စားရမလဲတောင် သိတော့ ဘူး..ReplyDeleteကြယ်ပြာOctober 6, 2011 at 12:29 AM၀တ်မှုန်နဲ့ ယှဉ်ထိုင်လိုက်မှပဲ အိန္ဒြာ ကျက်သရေရှိတာ ပိုပေါ်သွားတယ် ... ၀တ်မှုန်က လူငယ်ဆန်ဆန် ချစ်စရာကောင်းတာ .... အိန္ဒြာက ကျက်သရေရှိတာ ...ReplyDeletelinlinOctober 8, 2011 at 11:08 PMဝတ်မှုန် ဘေးကကုလားကြီးကိုပြောလိုက်...ဒီနှစ် အကယ်ဒမီရအောင်ရိုက်ပေးလို့...ReplyDeleteSoe GyiJuly 12, 2012 at 7:27 AMလှလိုက်တာReplyDeleteSoe GyiJuly 12, 2012 at 7:29 AMလှလိုက်တာReplyDeleteMrat HtunMarch 31, 2013 at 8:48 PMOh! I am afraid for future of myanmar.ReplyDeleteAdd commentLoad more...